Ungayikhetha Kanjani Futhi Uyisebenzise Ngokuzenzakalela Ikati yangasese
Yimaphi Amabhokisi Okungcola Okuzihlanza Ahamba Phambili? Ukuthola ibhokisi lodoti wekati elizenzakalelayo elihle kakhulu kudinga ukuthola ibhalansi phakathi kwezici ozifunayo nokuthi ikati lakho likhululekile. Amanye amakati angavinjelwa noma onakaliswe yimisindo emikhulu, ngakho-ke ibhokisi lodoti elenzelwe ukusebenza qu ...
Ngabe Ibhokisi Lezinto Zokuzihlanza Lingasebenzi Ngempela?
Yingxenye encane oyithandayo yokukhulisa ikati: ukuhlanza ibhokisi lodoti wekati. Kuze kwenzeke lokho, ukuvela kwamabhokisi kadoti wokuzihlanza wamakati kudala inketho yokuba nebhokisi likadoti uqobo lizihlanze ngemuva kwekati lakho. Kodwa ingabe la mabhokisi okulahla udoti wokuzihlanza wamakati angaphansi komsebenzi? W ...
Isimiso Esisebenzayo se-Smart Cat Litter Box
Amabhokisi kadoti wokuzihlanza asebenzisa ubuchwepheshe obusebenzisa inqubo yokuchitha ibhokisi lodoti. Amanye amamodeli anezinqubo zokuxubana zikagesi ezikhipha ngokuzenzakalela izigaxa zebhokisi lodoti ziye esitsheni esivaliwe, esilahlwa esikhwameni ngemuva kokuthi isilwane sisisebenzisile. Lezi zinhlobo zisebenzisa i-pres ...